Mareykanka: Jawaab milatari ayaan ka bixin doonaa weerarkii kiimikada Suuriya - BBC News Somali
Maraykanka ayaa sheegaya "inuu ka baaraandegayo xaalad kasta oo u furan" si uu uga jawaabceliyo weerarka la tuhunsan yahay in loo adeegsaday hubka kiimikada ah ee ka dhacay Suuriya, xilli hogaamiyayaasha galbeedka ay ka fekerayaan qaadidda tallaabooyin milateri.
Afhayeenka Aqalka Cad, Sarah Sanders ayaa weriyayaasha u sheegtay inaan go'aan laga gaarin tallaabada milateri ee la qaadayo.
Golaha ammaanka Qaran ee Maraykanka ayaa maanta ka shiraya tallaabada ay ka qaadayaan Suuriya, halka Ra'iisal wasaaraha UK, Theresa May ay isugu yeertay golaheeda wasiiradda.
Faransiiska ayaa sheegay inuu hayo caddeyn ah in ciidammada dowladda Suuriya ay adeegsadeen hubka kiimikada.
Image caption Shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in dadka ku waxyeeloobay weerarkan ay u badnaayeen haween iyo carruur
Muxuu yiri Maraykanka?
Afkhayeenka aqalka cad Ms Sanders ayaa sheegtay in madaxweyne Trump uu hayso fursado kala duwan oo intooda badan uu tixgelinayo.
"Ma aanan gaarin go'aanka tallaabada aan qaadaneyno," ayay tiri.
Hadalkaasi ayaa u muuqda mid ka duwan farriintii uu madaxweyne Trump shaaciyay oo uu uga digayay Ruushka in Suuriya ay kusoo wajahan yihiin gantaallo weerar ah
Image caption Markabka USS Donald Cook oo ku sugan badda Mediterranean
Maraykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa isku raacay inay si wadajir ah u shaqeeyaan iyadoo la aaminsanyahay inay isku diyaarinayaan inay weerar milateri ay qaadi rabaan oo ay ooga jawaabayaan weerarkii la sheegay in sunta kiimikada loo adeegsaday ee Sabtidii la soo dhaafay laga geystay Suuriya.
Wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka, James Mattis, ayaa sheegay in Mareykanka uu waday baaritaan suntakiimikada ah balse wuxuu ku daray in milateriga Mareykanka uu diyaar u yahay wax walbo oo soo baxa sida uu madaxweynaha sheegay.
Maxaa ka dhacay magaalada Douma?
Dadka u ololeeya arrimaha bini'adamnida iyo saraakisha caafimaadka ayaa sheegay in boqolal qof ay geeriyoodeen kaddib markii ay diyaaradaha dowladda sun kiimiko ah ku tureen magaalada Douma maalintii Sabtida ahayd.
Madaxweyne Bashar al-Assad oo taagero milateri ka helo Ruushka ayaa dafiray in ay dowladdiisa ka dambaysay weerarkaas.
Hayy'adda caafimaadka aduunka ayaa maalintii Arbacada ahayd dalbatay inay xaqiijiso warbixinada la shaaciyey oo ah in 70 qof ay dhinteen oo 43 ka mid ah ay la haayeen calaamadaha sunta kiimikada.